Ekubeni okokuqala kwaziswa kwiminyaka engaphezu kwamashumi amabini edlulileyo, i-WordPress ikhulile (kwaye ikhulile) ngoku ngoku kuthiwa ikhutshwe njenge-tanyag na sistema ng pamamahala ng tanyag na mundo. Namhlanje, bumhezu kwekota iiwebhusayithi ezikhoyo ziqhutywa kwi-WordPress.
Kodwa ukulangela ngexesha elidlulileyo, into eyaziwayo kakhulu kukuba, abantu baninzi bafuna ukunyusa kwiindlela ezingenanto. Jonga nje kwi-Microsoft Windows kunye inani elikhulu le-malware, ii-virus nezinye izinto yenzelwe ukujolisa nje kule nkqubo eyodwa yokusebenza.
Iingxelo ze-10 WordPress ezininzi ezixhatshazwayo (umthombo). Uphando kwi-2017 ichonge iinguqu ze-74 ezahlukileyo ze-WordPress kwiwebhusayithi ye-Alexa Nangungunang 1 yezigidi; I-11 yale miqulu ayivumelekanga – umzekelo 6.6.6 (umthombo).
0.1 Kutheni i-blog yakho ye-WordPress ibaluleke kakhulu?
2.1 7. Khusela i-direktoryo yakho ye-wp-admin
2.3 9. Sebenzisa iNetwork Distribution Network (CDN)
2.4 10. Qinisekisa ukuba YONKE isoftware yakho ihlaziyiwe
2.5 11. Pag-backup, backup na kunye backup!
3.1 Pangwakas na Iingcinga
Kutheni i-blog yakho ye-WordPress ibaluleke kakhulu?
Ukuba ucinga ukuba kutheni emhlabeniisipdaka ungathanda ukulawula iblogi yakho ye-WordPress, kukho izizathu ezininzi ezibandakanya;
Ngethamsanqa, i-WordPress yinqanaba elinikeza ininzi ithuba lokuzikhusela. Xa ndikuncede ukusetha nokuphatha iiwebhusayithi eziliqela kunye namabhulogi ngokwam, ndingathanda ukwabelana nawe ezinye zezinto ezisisiseko ongayenza ukuya uncede ukukhusela isayithi lakho le-WordPress.
Nazi izicwangciso ze-10 zokhuseleko ongazenzayo.
Ukukhusela iphepha lakho lokungena alikwazi ukufezwa yiphina inye into ethile, kodwa ngokuqinisekileyo kukho amanyathelo kwaye iifowuni zokhuseleko unokuthatha ukuze wenze naluphi na ukuhlaselwa okuncinci ukuphumelela.
Iphepha lakho lokungena lewebhusayithi ngokuqinisekileyo lelinye lamaphepha asengozini kakhulu kwiwebhusayithi yakho, ngoko sa masiqalise ukwenza iphepha lakho lokungena le-WordPress libe likhuselekile kancinane.
Ngokomzekelo, ukuba isayithi lakho liyi-crazymonkey33.com, umnqwenga angazama ukungena pag-isip nge ‘Crazymonkey33’.
Idatha yeSplash uluhlu lwee- amaphasiwedi asetyenziswa rhoqo ngo-2018. Iphasiwedi ngokwezikhundla ngokwendlela yokusebenzisa.
Ukuba usebenzisa enye yeephasiwedi kunye newebhusayithi yakho yamkela nayiphi na i-traffic, i-website yakho niya kufutshwa ngokukhawuleza kamva okanye kamva.
Iphasiwedi eqinileyo iya kubandakanya umxube kami:
Yiba yi-alphanumeric (AZ kunye no-az)
Okungaphaya kwegama lakho lephasiwedi, likhuseleke ngakumbi. Zama eli jenerethi yegama le-password xa unenkathazo epakamileyo. https://passwordsgenerator.net/
I-Wall bots ukusuka kwi-blog yakho yeWP.
I-RecCaptcha yenzelwe payyeka izixhobo zokusebenza ngokusebenza kwisayithi. Ewe, kunikezelwa ubunzima bokusetyenziswa kwezixhobo namhlanje, ezi zinokugqithiswa ngokulula, kodwa ubuncinci kukho olo lukhuseleko olongezelelweyo.
Nazi inani leeplagiza zeReCaptcha ongayisebenzisa kunye nokufakela kwakho okuya kusebenza kakhulu ebhokisini.
Le ndlela yokuqinisekiswa inikezela ukukhuselwa kakuhle kwaye isetyenziselwa iibhanki ezininzi kunye namaziko emali namhlanje. Kwakhona, le mfuno inokudibana lula kunye I-plugin ye-2FA.
Bona indlela miniOrange (i-plugin ye-2FA) isebenza nge-WordPress yokungena kwividiyo elandelayo.
Ukongeza olunye ugcino lokukhusela, utshintshe i-URL yekhasi lokungena ngokukhawuleza kwaye ungenakusebenza ngaphandle kwesixhobo esinjenge I-WPS Fihla ukungena.
Le yindlela enye elula ngokulula pautang ukuhlaselwa ngamandla kwiphepha lakho lokungena kwiindawo zazo. Uhlaselo olunamandla olushushu lusebenza ngokuzama ukufumana igama lakho lomsebenzisi kunye nephasiwedi ngokufanelekileyo ngokuzama ukudibanisa ezininzi ngokuphindaphindiweyo.
Ukuba i-IP ethile eyenza ukuhlaselwa kulandelwa, ngoko unokubamba ukukhwabanisa ngokuphindaphindiweyo ukuzama ukuzama ukugcina indawo yakho ikhuselekile. Yingakho ukuhlaselwa kwe-DDOS yelizwe jikelele kwenzeka ngee-adresi ezininzi ze-IP kunye nemvelaphi eyahlukileyo yokuhlaselwa, ukuphonsa iinkonzo zokubamba kunye nekhuseleko lwewebhu kwi-guard.
Pag-login sa LockDown kwaye Solution Security Solution Zombini zinikezela ngezisombululo ezinkulu zokukhusela iphepha lakho lokungena kwiwebhusayithi. Balandela iidilesi ze-IP kwaye banciphisa inani lokuzama ukungena ukukhusela iwebhusayithi yakho.
Sithethe ngeendlela ezahlukeneyo zokukhusela iphepha lakho lokungena kwi-WordPress – lawo manyathelo akhankanywe apha ngasentla ziziseko ongayenza. Si Kuya kufuneka wazi ukuba ezinye ii-web host ziyakuyalela ezinye zezi ndlela zokhuseleko kubasebenzisi bazo. Kukho inani lezinye izinto zokhuseleko onokuzisebenzisa kwiisayithi zakho.
7. Khusela i-direktoryo yakho ye-wp-admin
Ukwenza njalo, uzakufuneka ungene ngemvume kwipaneli yokulawula i-akhawunti yakho. Ingaba usebenzisa cPanel o Plesk, ukhetho o lukhangelayo ‘Iphasiwedi-khusela izalathisi’
Ngenye indlela, unokukhusela i-password kwisikhangeli ngokuthi uthinte iifayile zakho .htaccess kunye .htpasswds. Iinkcukacha zenyathelo-nabanggit na kunye nesikhokelo sekhowudi ziyafumaneka simahla kwa IDynamic Drive.
Qaphela ukuba iphasiwedi-ukukhusela isikhombisi sakho se-wp yaphula uluntu i-AJAX ye-WordPress -Uya ang pag-utos ng utos na iimvume zokulawula iAjax nge .htaccess ukuphepha naziphi na iimpazamo zesiza.
Uxhumano lweHTTP vs HTTPS (Umthombo: Sucuri)
Ngaphandle kwesiza ngokwaso, uya kufuna ukugcina uxhulumaniso phakathi kwakho kunye nomncedisi kwaye yilapho i-SSL ingena khona ukubethela ukuxhumana kwakho. Ngokuqhagamshelana nge-encrypted, abahlaseli abayi kukwazi ukunciphisa idatha (njengephasiwedi yakho) xa uxhulumana nomncedisi wakho.
Kubablogi bodwa kunye namashishini amancinci, i-SSL yasimahla, ekwabelwana ngayo – onokuyifumana rhoqo kumboneleli wakho wokubamba, Masibhale, okanye CloudFlare -Ihlala ingaphezulu kokulunga ngokwaneleyo Kumashishini aqhuba intlawulo yabathengi-uwi ).
9. Sebenzisa iNetwork Distribution Network (CDN)
Ngelixa aking accountakuyigcina indawo yakho ekutshixeni kunceda ekulweni nasekuhlaselweni kakubi. Abanye abapheti banenjongo yokuhlisa iiwebhusayithi, bazenze bangakwazi pautang kuluntu. I-CDN niya kunceda ukutsala ngokuvuthelwa kwe- Ukuhanjiswa okuchaseneyo kweNkonzo uhlaselo kwindawo yakho.
Ngaphandle kwaloo nto, inceda kwakhona ukukhawulezisa isayithi yakho encinci ngokukhupha umxholo othile. Ukuphanda magpakilala, jonga kwi-CloudFlare njengomzekelo. I-CloudFlare inikezela ngeenkonzo ze-CDN kumanqanaba amanqanaba ahlukeneyo, ngoko unokukwazi ukusebenzisa izixhobo ezisisiseko mahhala. https://www.cloudflare.com
10. Qinisekisa ukuba YONKE isoftware yakho ihlaziyiwe
Kungakhathaliseki ukuba isofthiwe esilungileyo okanye esabizi kangakanani, kuya kuba soloko kubakho ubuthathaka obutsha obufumaneka kuzo ezingabashiya zivulekele ukuzisebenzisa. I-WordPress ayikho nto kwaye iqela lihlala likhulula iinguqulelo ezintsha kunye nokulungiswa.
Hackers phantse bafune ukusizakala ngobuthakathaka kunye nokuxhaphazwa okuyaziwayo okushiywe kungafihliwe kumane kucele inkathazo. Oku kuhamba ngokuphindwe kabini kwiiplagi ezivame ukudala ngamakhampani amancinci anezixhobo ezincinci.
Xa utethile oku, andikucebisi ukuba usebenzise I-WordPress ngokuzenzekelayo kunye nezibuyekezo zePlagin, ngakumbi xa usebenzisa indawo epilayo. Ezinye izibuyekezo zingabangela iingxaki, ingaba ngaphakathi okanye ngokubambisana nezinye iiplagi kunye nezicwangciso.
Ngokufanelekileyo, yenza indawo yokuvavanya ebeka izibuko kwindawo yakho epilayo kwaye uvavanye ukuhlaziywa apho. Xa uqinisekile ukuba yonke into isebenza kakuhle ngoko ungasebenzisa ukuhlaziywa kwisayithi epilayo.
11. Pag-backup, backup na kunye backup!
Ngokuqhelekileyo umncedisi wakho wewebhu uza kuza kunye nezinye izinto ezisisiseko zokugcina, kodwa ukuba ungeyonto efana nam, qho qinisekisa ukuba wenza iifayile zakho ezizimeleyo. Ukuxhaswa akulula nje nje ukukopisha ezinye iifayile, kodwa qwalasela ingcaciso kwi-database yakho.
Khangela isisombululo sokukhusela esilungileyo kwaye savunywa. Nokuba utyalo-mali oluncinci lufanelekile ukuba ulondoloze ngezinyembezi kwimeko yengxamiseko. Sa efana BackupBuddy Unokukunceda ukugcina yonke into equka isiseko sakho kwiziko elilodwa.
Nangona ngokuqhelekileyo, iinkampani zokubamba iwebhu zinikezela indawo yokusingatha indawo yethu, iixesha zitshintshile. Ababoneleli be-Web hosting, ekuqapheliseni isidingo esiphuthumayo sokwandisa ukhuseleko, baye baqhubela phambili, baninzi banika iinkonzo ezongezelelweyo zenkxaso-mali ang pagkuha ng bazalise i-web hosting yabo.
Thatha umzekelo HostGator, elinye lamagama asekelwe ngakumbi kumdlalo. Ngaphandle kwezixhobo ezisemgangathweni ze-Cloudflare, i-HostGator (ngentengo ye- $ 10 + / mo) iphinda ifike ngoKhuselo lwe-Spam yamahhala, ukuKhutshwa kweMalware ngokuzenzekelayo, i-Backups ezenzekelayo, Ubumfihlo.
Umphathi we-WordPress ophetheyo, Kinsta, yakha izixhobo zomlilo kunye nokubeka esweni iiseva zazo ze-malware kunye nokuhlaselwa kwe-DDoS ipinakkqubo eyakhelwe isiko.
Ukuba le nto yinto engakaze iyenze kuwe, ndiyakhuthaza ukuba ukhangele ukuba yeyiphi impawu zokukhusela ummkeli wakho onika kwaye uyilinganise kunye nezinto ezikhoyo ngoku.
Nanku apho sa efana nayo LweNanja Security kungena, okukunceda uhlole indawo yakho ipinakilala yobuthathaka.
I-demo ekhawulezayo: Indlela ye-Security Ninja isebenza ngayo.
Kukho izizathu ezimbalwa eziphos Protectionyo zokusebenzisa into efana ne-Security Ninja kodwa ndivumele ukuba ithuluzi endikucebisa ukuba lisetyenziswe kwizigaba ezininzi ekuhambeni kwakho ukugcina indawo yakho.
Emva koko kusekelwe kwezo ziphumo, sebenzela ukufumana indawo yakho. Ukhuseleko lwe-Ninja lwenza ngaphezulu kweemvavanyo ze-50 ukuhlola ubungqina bakho. Nangona emva kokuba wenze utshintsho lwakho, ligijime kwakhona (kunye naliphi ixesha kukho utshintsho lwesayithi okanye i-plugin update) bayadvavanya indawo yakho.
Ukuba le nto ithetha njengomsebenzi omncinci kakhulu kuwe, i-Security Ninja iphinda ifikelele iimodyuli ezongeziweyo (pro bersyon, indawo enye ye-29) enokukunceda ukulungisa iingxaki ezifumanekayo.
Ukukhangela iifayile eziphambili zeWP mag-utos ng iifayile ezinengxaki
Khusela ifowuni yokungena kwi-brute-force attack
Pangwakas na Iingcinga
Nangona zonke ezi zinto zingabonakala zigqithiseleyo kumsebenzisi oqhelekileyo we-WordPress, ndiqinisekisa ukuba yonke into (kunye nokunye) iyimfuneko. Ukungaziboni iinkcukacha ze-hack emhlabeni wonke kwaye ungenzi ixesha elithile, ndivumele ukwabelana nawe ngolwazi oluthile kwiziko ezininzi ezifihlakeleyo ndinceda ukulawula.
Ekubeni okokuqala kwaziswa kwiminyaka engaphezu kwamashumi amabini edlulileyo, i-WordPress ikhulile (kwaye ikhulile) ngoku ngoku kuthiwa ikhutshwe njenge-hệ thống quản lý phổ biến. Namhlanje, ngaphezu kwekota iiwebhusayithi ezikhoyo ziqhutywa kwi-WordPress.
Kodwa ukususela ngexesha elidlulileyo, vào Eyaziwayo kakhulu kukuba, abantu baninzi bafuna ukunyusa kwiindlela ezingenanto. Jonga nje kwi-Microsoft Windows kunye inani elikhulu le-phần mềm độc hại, ii-virus nezinye izinto yenzelwe ukujolisa nje kule nkqubo eyodwa yokusebenza.
Iingxelo ze-10 WordPress ezininzi ezixhatshazwayo (umthombo). Uphando kwi-2017 ichong iinguqu ze-74 ezahlukileyo ze-WordPress kwiwebhusayithi ye-Alexa Top 1 yezigidi; I-11 yale miqulu ayivumelekanga – umzekelo 6.6.6 (umthombo).
1.3 3. Sabenzisa i-reCaptcha
1.4 4. Sabenzisa isiQinisekiso sezinto ezimbini (2FA)
2 Tường Harden Indawo ukhuseleko
2.1 7. Khusela i-thư mục yakho ye-wp-admin
2.2 8. Vương quốc Anh i-SSL ukubethela idatha
2.3 9. Mạng phân phối của Sabenzisa iNetwork (CDN)
2.4 10. Qinisekisa ukuba YONKE là phần mềm yakho ihlaziyiwe
2.5 11. Sao lưu, sao lưu kunye sao lưu!
3.1 Chung kết Iingcinga
Ukridza indawo yakho kwi-botnet ukuba bangayisebenzisa kamva
Ngethamsanqa, i-WordPress yinqanaba elinikeza ininzi ithuba lokuzikhusela. Xa ndikuncede ukusetha nokuphatha iiwebhusayithi eziliqela kunye namabhulogi ngokwam, atingathanda ukwabelana nawe ezinye zezinto ezisisiseko ongayenza ukuze uncede ukuk.
Đức quốc xã izicwangciso ze-10 zokhuseleko ongazenzayo.
Ukukhusela iphepha lakho lokungena alikwazi ukufezwa yiphina inye thành ethile, kodwa ngokuqinisekileyo kukho amanyathelo kwaye iifowuni zokhuseleko unokuthatha ukuze.
Iphepha lakho lokungena lewebhusayithi ngokuqinisekileyo lelinye lamaphepha asengozini kakhulu kwiwebhusayithi yakho, ngoko ke masiqalise ukwenza iphepha lakho lokungena.
Sabenzisa amagama abasebenzisi angaqhelekanga. Ngaphambili ngeWordPress, bekufuneka uqale usebenzise igama lomsebenzisi elisisiseko, kodwa oko akusekho njalo. Okwangoku, uninzi lwabameli abatsha bewebhu basebenzisa igama lomsebenzisi elingagqibekanga kwaye kufuneka batshintshe igama labo lomsebenzisi. Ungasebenzisa Ulawulo lweRamamer lwandisiwe ukutshintsha igama lomsebenzisi lomlawuli.
Ukunyanzeliswa kwamaphepha okungena kungenye yeendlela eziqhelekileyo zokuhlaselwa kwewebhu iwebhusayithi yakho inokuthi ijongane nayo. Ukuba unokwazi ukuqagela igama eligqithisiweyo okanye igama lomsebenzisi, iwebhusayithi yakho ngokuqinisekileyo ayizukuba kukujolisa kuphela kodwa ek Ukusuka kumava, uninzi lweendawo zokuzama ukukhangela izame ukungena kunye nokhetho oluphambili lwamagama abasebenzisi. Ezi zibini zokuqala zihlala ‘zilawulwa’ okanye ‘ngumlawuli’, ngelixa eyesithathu ihlala isekwe kwigama lakho lesizinda.
Ngoku ungacesa ukuba abantu baya kukwazi ukusebenzisa iiphasiwedi ezinamandla, ezinzima ukukhusela i-akhawunti yabo, kodwa kukho abaninzi abanokucinga ukuba ‘.
Ukuba usebenzisa enye yeephasiwedi kunye newebhusayithi yakho yamkela nayiphi na i-Traffic, i-website yakho iya kufutshwa ngokukhawuleza kamva okanye kamva.
Iphasiwedi eqinileyo iya kubandakanya umxube chúng tôi:
Yiba yi-chữ và số (AZ kunye no-az)
Okungaphaya kwegama lakho lephasiwedi, likehuseleke ngakumbi. Zama eli jenerethi yegama le-password xa unenkathazo ephakamileyo. https://passwordsgenerator.net/
3. Sabenzisa i-reCaptcha
I-Wall bot ukusuka kwi-blog yakho yeWP.
I-RecCaptcha yenzelwe ukuyeka izixhobo zokusebenza ngokusebenza kwisayithi. Ewe, kunikezelwa ubunzima bokusetyenziswa kwezixhobo namhlanje, ezi zinokugqithiswa ngokulula, kodwa ubuncinci kukho olo lukhuseleko olongezelelweyo.
Đức quốc xã inani leeplagiza zeReCaptcha ongayisebenzisa kunye nokufakela kwakho okuya kusebenza kakhulu ebhokisini.
4. Sabenzisa isiQinisekiso sezinto ezimbini (2FA)
I-2FA yindlela yokuqinisekiswa efuna ukuqinisekiswa kokungena kwakho. Umzekelo, xa ungene ngemvume ngegama lakho lomsebenzisi kunye nephasiwedi, inkqubo ingathumela i-SMS kwifowuni yakho yeselula okanye i-imeyili ngekhowudi ofuna ukuyifaka.
isampula.com / wp-admin.
Ukridza olunye ugcino lokukhusela, utshintshe i-URL yekhasi lokungena ngokukhawuleza kwaye ungenakusebenza ngaphandle kwesixhobo esinjenge I-WPS Fihla ukungena.
Le yindlela enye elula ngokulula ukuyeka ukuhlaselwa ngamandla kwiphepha lakho lokungena kwiindawo zazo. Uhlaselo olunamandla olushushu lusebenza ngokuzama ukufumana igama lakho lomsebenzisi kunye nephasiwedi ngokufanelekileyo ngokuzama ukudibanisa ezininzi ngokuphindaphindiey.
Ukuba i-IP ethile Eyenza ukuhlaselwa kulandelwa, ngoko unokubamba ukukhwabanisa ngokuphindaphindiweyo ukuzama ukuzama ukugcina indawo yakho ikhuselekile. Yingakho ukuhlaselwa kwe-DDOS yelizwe jikelele kwenzeka ngee-adresi ezininzi ze-IP kunye nemvelaphi eyahlukileyo yokuhlaselwa, ukuphonsa iinkonzo zokubok.
Đăng nhập LockDown kwaye Giải pháp bảo mật Giải pháp Zombini zinikezela ngezisombululo ezinkulu zokukhusela iphepha lakho lokungena kwiwebhusayithi. Balandela iidilesi ze-IP kwaye banciphisa inani lokuzama ukungena ukukhusela iwebhusayithi yakho.
Tường Harden Indawo ukhuseleko
Sithethe ngeendlela ezahlukeneyo zokukhusela iphepha lakho lokungena kwi-WordPress – lawo manyathelo akhankanywe apha ngasentla ziziseko ongayenza. Kuya kufuneka wazi ukuba ezinye ii-web host ziyakuyalela ezinye zezi ndlela zokhuseleko kubasebenzisi bazo. Kukho inani lezinye izinto zokhuseleko onokuzisebenzisa kwiisayithi zakho.
7. Khusela i-thư mục yakho ye-wp-admin
Ulawulo lwe-wp-admin yintliziyo ye-WordPress yokufakela. Njengekhuselo olongezelelweyo, igama lephasiwedi likehusele le khowudi.
Ukwenza njalo, uzakufuneka ungene ngemvume kwipaneli yokulawula i-akhawunti yakho. Ingaba usebenzisa cPanel hoặc Plesk, ukhetho o lukheachayo ‘Iphasiwedi-khusela izalathisi’
Ngenye indlela, unokukhusela i-password kwisikhangeli ngokuthi uthinte iifayile zakho .htaccess kunye .htpasswds. Iinkcukacha zenyathelo-nyathelo kunye nesikhokelo sekhowudi ziyafumaneka simahla kwa IDocate Drive.
Qaphela ukuba iphasiwedi-ukukhusela isikhombisi sakho se-wp yaphula ul Ubuntu i-AJAX ye-WordPress -Uya kudinga ukuvumela iimvume zokulawula iAjax nge .htaccess ukuphepaz.
8. Vương quốc Anh i-SSL ukubethela idatha
Ngaphandle kwesiza ngokwaso, uya kufuna ukugcina uxhulumaniso phakathi kwakho kunye nomncedisi kwaye yilapho i-SSL ingena khona ukubethela ukuxhumana kwakho. Ngokuqhagamshelana nge được mã hóa, abahlaseli abayi kukwazi ukunciphisa idatha (njengephasiwedi yakho) xa uxhulumana nomncedisi wakho.
Funda kabanzi nge-SSL ngokubanzi Umkhokelo chúng tôi-AZ kwi-SSL.
9. Mạng phân phối của Sabenzisa iNetwork (CDN)
Ngelixa oku akunakuyigcina indawo yakho ekutshixeni kunceda ekulweni nasekuhlaselweni kakubi. Abanye abaphethi banenjongo yokuhlisa iiwebhusayithi, bazenze bangakwazi ukufikelela kul Ubuntu. I-CDN iya kunceda ukutsala ngokuvuthelwa kwe- Ukuhanjiswa okuchaseneyo kweNkonzo uhlaselo kwindawo yakho.
Ngaphandle kwaloo nto, inceda kwakhona ukukhawulezisa isayithi yakho encinci ngokukhupha umxholo othile. Ukuphanda olu khetho, jonga kwi-CloudFlare njengomzekelo. I-CloudFlare inikezela ngeenkonzo ze-CDN kumanqanaba amanqanaba ahlukeneyo, ngoko unokukwazi ukusebenzisa izixhobo ezisisiseko mahhala. https://www.cloudflare.com
10. Qinisekisa ukuba YONKE là phần mềm yakho ihlaziyiwe
Kungakhathaliseki ukuba isofthiwe esilungileyo okanye esabizi kangakanani, kuya kuba soloko kubakho ubuthathaka obutsha obufumaneka kuzo ezingabashiya zivulekele ukuzisebenzisa. I-WordPress ayikho nto kwaye iqela lihlala likehulula iinguqulelo ezintsha kunye nokulungiswa.
Tin tặc phantse bafune ukusizakala ngobuthakathaka kunye nokuxhaphazwa okuyaziwayo okushiywe kungafihliwe kumane kucele inkathazo. Oku kuhamba ngokuphindwe kabini kwiiplagi ezivame ukudala ngamakhampani amancinci anezixhobo ezincinci.
Ukuba usebenzisa ii plugin, qinisekisa ukuba uhlaziyo lukhutshwa rhoqo, okanye uqwalasele ukufumana iiplagi ezithandwayo ezinokusebenza okufanayo zigcinwa zihlazwa.
Xa uthethile oku, andikucebisi ukuba usebenzise I-WordPress ngokuzenzekelayo kunye nezibuyekezo zePlagin, ngakumbi xa usebenzisa indawo ephilayo. Ezinye izibuyekezo zingabangela iingxaki, ingaba ngaphakathi okanye ngokubambisana nezinye iiplagi kunye nezicwangciso.
Ngokufanelekileyo, yenza indawo yokuvavanya ebeka izibuko kwindawo yakho ephilayo kwaye uvavanye ukuhlaziywa apho. Xa uqinisekile ukuba yonke vào isebenza kakuhle ngoko ungasebenzisa ukuhlaziywa kwisayithi ephilayo.
11. Sao lưu, sao lưu kunye sao lưu!
Ngokuqhelekileyo eldcedisi wakho wewebhu uza kuza kunye nezinye izinto ezisisiseko zokugcina, kodwa ukuba ungeyonto efana nam, qho qinisekisa ukuba wenza iifayile zakh. Ukuxhaswa akulula nje nje ukukopisha ezinye iifayile, kodwa qwalasela ingcaciso kwi-cơ sở dữ liệu yakho.
Khangela isisombululo sokukhusela esilungileyo kwaye savunywa. Nokuba utyalo-mali oluncinci lufanelekile ukuba ulondoloze ngezinyembezi kwimeko yengxamiseko. Vào efana BackupBuddy Unokukunceda ukugcina yonke thành Equka isiseko sakho kwiziko elilodwa.
Nangona ngokuqhelekileyo, iinkampani zokubamba iwebhu zinikezela indawo yokUSEatha indawo yethu, iixesha zitshintshile. Ababoneleli be-Web hosting, ekuqapheliseni isidingo esiphuthumayo sokwandisa ukhuseleko, baye baqhubela phambili, baninzi banika iinkonzo ezongezelelweyo zenkxaso-mali ukuze.
Thatha umzekelo HostGator, elinye lamagama asekelwe ngakumbi kumdlalo. Ngaphandle kwezixhobo ezisemgangathweni ze-Cloudflare, i-HostGator (ngentengo ye- $ 10 + / mo) iphinda ifike.
Umphathi chúng tôi-WordPress ophetheyo, Kinsta, yakha izixhobo zomlilo kunye nokubeka esweni iiseva zazo ze-phần mềm độc hại kunye nokuhlaselwa kwe-DDoS ngenkqubo Eyakhelwe isiko.
Ngaphambi kokuba ubalekele zasendle uze uqale ukukhangela i-intanethi ngokukrakra ukukhangela izigidi kunye nesisombululo esisodwa sokukhusela – uthedit umoya okhulu. Njengoko kunye nantoni na enye, umntu uza kukuncedisa ukwethuka kwaye ufune isisombululo.
Nanku apho vào efana nayo LweNanja An ninh kungena, okukunceda uhlole indawo yakho ngenxa yobuthathaka.
Kukho izizathu ezimbalwa eziphosakeleyo zokusebenzisa thành efana ne-Security Ninja kodwa ndivumele ukuba ithuluzi endikucebisa ukuba lisetyenziswe kwizigaba ezininzi.
Emva koko kusekelwe kwezo ziphumo, sebenzela ukufumana indawo yakho. Ukhuseleko lwe-Ninja lwenza ngaphezulu kweemvavanyo ze-50 ukuhlola ubungqina bakho. Nangona emva kokuba wenze utshintsho lwakho, ligijime kwakhona (kunye naliphi ixesha kukho utshintsho lwesayithi okanye i-plugin cập nhật) ukuvavanya indawo yakho.
Ukuba le nto ithetha njengomsebenzi omncinci kakhulu kuwe, i-Security Ninja iphinda ifikelele iimodyuli ezongeziweyo (phiên bản pro, indawo enye ye-29) enokukunceda ukulungisa.
Muaisela iifayile eziguqulwe ngokukodwa
Ukunqanda i-IP ye-IPM emibi eyi-triệu eqokelelwa kwizigidi zeendawo ezihlaselwe
Khusela ifowuni yokungena kwi-brute-force tấn công
Chung kết Iingcinga
Nangona zonke ezi zinto zingabonakala zigqithiseleyo kumsebenzisi oqhelekileyo we-WordPress, ndiqinisekisa ukuba yonke vào (kunye nokunye) iyimfuneko. Ukungaziboni iinkcukacha ze-hack emhlabeni wonke kwaye ungenzi ixesha elithile, ndivumele ukwabelana nawe ngolwazi oluthile kwiziko ezininzi ezifihlakeleyo ndinceda.
Ekuqaleni kwaqala njengendawo elula ye-tiểu sử, ndadala www.timothyshim.com. Kucacile ukuba, yinto nje endinokumisela kwaye ininzi yexesha ihamba yodwa, nje ngeyona nkcazelo. Ngexesha elide leenyanga, kwesi siza ayenzi nto kwaye ayiqokeleli idatha, ubhekane nokuhlaselwa kwe-30 – inhlanganisela yamandla enqabileyo kunye neyinkimbimbimbimb.
Thông minh Twitter Bios Okuya Kukwenza Uhambe Oooh noAahh